WARARKA DIBADA | Bakool.net | Page 5
Home / WARARKA DIBADA (page 5)
Labo cirbixiyeen oo ka badbaaday dayaxgacmeed cillad gashay
Labo cirbixiyeen oo u kala dhashay dalalka Ruushka iyo Maraykanka ayaa si dirqi ah ugaga soo badbaaday kadib markii dayaxgacmeed ay saarnaayeen hawada sare cillad ku qabsatay.Wararka ayaa sheegaya in cirbixiyeenadan ay ku soo badbaadeen kadib markii qalab yar oo badbaadada loogu talogalay uu dhulka ku soo celiyay. Labada cirbixiyeen oo kala ah Alexey Oychinin oo Ruushka u ...
Aqalka Cad ayaa ku dhawaaqay in danjirihii Mareykanka u joogtay Qaramada Midoobay Nikki Haley ay xilkaasi ka dagi doonto dhawaan. Kadib kulan saakay Aqalka Cad ku dhexmaray madaxweyne Trump iyo Haley ayuu Trump ku sheegay in Haley ay xilkaasi banneyneyso marka la gaaro dhammaadka sannadkaan. Madaxweyne Trump ayaanan faah-faahin sababta ay xilka uga dageyso ergaygi Mareykanka u fadhiday Qaramada Midoobay, ...
Oslo: Laba qof oo u dhaq-dhaqaaqa ka hortaga Kufsiga ayaa ku guuleystey Abaalmarinta Nabadda ee Nobel 2018
06/10/2018	Leave a comment
Guddiga Abaalmarinta Nobelka (Nopel Peace Prize) ayaa maanta magaalada Oslo ee dalka Norwa uga dhawaaqey in dhahtarka la yiraahdo Denis Mukwege iyo gabadha la yiraahdo Nadia Murad ay sanadka muteysteen abaal marinta nabadda ee Nopel-ka. Labadan qof ayaa ku muteystey abaal marinta sida ay ugu dhaq-dhaqaaqaan in la joojiyo galmada cunfiga iyo kufsiga ku dhisan, isla markaana u gacan qabteen ...
Suxufi Sacuudiyaan oo lagu la’yahay Turkiga
Suxufi u dhashay dalka Sacuudiga ayaan dib loo arag tan iyo markii uu gudaha u galay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul, horraantii toddobaadkan. Jamal Khashoggi, oo wax ku qori jiray wargyeksa Washington Post, ayaa si dibad-joog oo iskiis ah ugu noolaa dalka Mareykanka tan iyo sanadii tagtey markii mas’uuliyiinta Sacuudiga ay billaabeen inay aamusiyaan codadka mucaaradka. Suxfigan ayaa aad u dhaliili ...
Maraykanka iyo China oo markale hadalo kulul is-dhaafsaday
05/10/2018	Leave a comment
Madaxweyne kuxigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa khamiistii shalay shir jaraa’iid uu qabtay ku eedeeyey Shiinaha inay faraha kula jiraan siyaasada arrimaha gudaha ee Maraykanka iyo waliba weerarka ay ku hayaan dhaqaalaha & Militariga dalkooda. Pence ayaa sheegay in Dowlada Shiinaha ay wado olole xoogleh oo ay dooneyso inay saameyn ku yeelato dalka Maraykanka, wuxuu ku eedeeyey xukuumada Shiinaha dooneyso in ...
Dowladda Iiraan oo sheegtay inay diyaar u tahay wada-hadallada Marekanka
Xukuumadda dalka Iiraan ayaa xasuusisay Marekanka inay diyaar u yihiin wada-hadallo dib loo billaabo,kaddib markii uu Marekanka ka baxay heshiiskii Nukliyeerka Iiraan ee sanadkii 2015-kii. Iiraan waxaa ay shaki-galisay sida loogu kalsoonan karo madaxweynaha Marekanka Donald Trump,balse wasiirka arrimaha dibadda Iiraan , Javad Zarif wuxuu qabaa in wax kasta ay suuragal yihiin, isla markaana aanay albaabada ka xiran madaxweynaha Maraykanka ...
Indonesia oo caalamka ka codsatay gargaar deg deg ah
Xukuumadda Indonesia ayaa wadamada horumaray ee caalamaka ka codsatay in lala soo gaaro kaalmo deg deg ah oo lagu samata bixinayo noloshada dadkii ay dhul gariirka iyo Sunaamiga ku dhufteen ee dalkaasi, ayna ku dhinteen in ka badan 832 qof. Mas’uul sare oo ka tirsan Xukuumada dalkaasi ayaa shjeegay in Madaxweynaha Indonesia Joko Widodo uu amar ku bixiyay in dadka ...
Indonisia: 832 qof oo ku geeryooday dhulgariirkii jasiiradda Sulawesi
30/09/2018	Leave a comment
Ugu yaraan 832 ruux ayaa ku dhintay duufaan ka dhalatay dhulgariir cabbirkiisu gaaray 7.5 oo ku dhufatay jasiiradda Sulawesi ee dalka Indonisia, sida ay baahisay wakaaladda maareynta masiibooyinka ee dalkaasi. Dad badan ayaa la sheegay in ay ku xayiran yihiin dhismayasha dumay,halka dhaawaca uu gaarayo in ku dhow kun,kuwaas oo badankood lagu daweynayaa Isbitaal ay ciidamadda leeyihiin oo Palu ku ...
Trump oo cambaareyn kala dul dhacay China….
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo markii ugu horeysay shir guddoomiyey kulankiisii ugu horeeyey ee Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si gaar ah ugu weeraray dalalka Iran iyo China. Kulankan ayuu Trump inta badan diirada ku saaray hanjabaada uu u jeedinayo dowlada Iran oo uu sheegay inay saari doonaan cunaqabateyntii ugu adkeyd taariikhda, waa siduu hadalka u dhigayee. Trump ayaa ...
Madaxweyne Erdogan oo muddo ka dib soo hadal qaaday xaalada Soomaaliya….
Madaweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ayaa xalay magaalada New York kula kulmay xubno ka socday muslimiinta Mareykanka. Erdogan ayaa Mareykanka u yimid ka qeybgalka shirka 73-aad ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay. Khudbad uu jeediyay xalay markii uu Muslimiinta kula kulmay New York ayuu ku soo hadal qaaday xaaladda Soomaaliya, qaxootiga Syria, la dagaalanka ISIS, iyo aayaha magaalada Qudus oo ...